hunyanzvi - Jiangsu Huanneng Silicon Carbon Ceramics Co., Ltd.
Shandisa noti (tinya kuti uverenge zvimwe)
1.Tarisa kuramba kwesilicon carbide kudziyisa chinhu mune imwechete batch usati wavhura kurongedza, isa yepedyo kuramba muchikamu chimwe chete, izvo zvinoita kuti tembiricha tembiricha iwedzere yunifomu, iko kuramba kwatinonyora munzvimbo inotonhora.
2.Nekuti nesilicon carbide yakaoma uye yakapwanyika zvinhu, usayedze kugadzirisa kana iwe uchiisa, ita kuti igone kutakurika sezvinobvira, zvinoreva kuigadzira uye inogona kubuda nyore mushure mekuisa. Iyo silicon carbide yekudziya chinhu inogona kuisa ne dangle kana flat.
3.Iyo silicon carbide yekudziya element controller inoshandisa thyristor kutonga, saka simba rinogadzirika, iro rakatemwa simba remutongi rinofanirwa kunge rakapetwa katatu pane iro rakatarwa simba rechoto, nekudaro ichiwedzera iyo silicon carbide yekupisa yehupenyu hupenyu, ichishandisa nenzira iri nani.
4.Sarudza iyo inonzwisisika wiring nzira inoenderana nesaizi uye kuramba kwesilicon carbide kudziyisa chinhu.
5.Iyo nyowani yesilicon carbide yekudziya chinhu inofanirwa kuwedzera simba zvishoma nezvishoma mukupisa, ita musiyano pakati pesilicon carbide yekudziya element tembiricha uye tembiricha tembiricha ishoma, nokudaro ichiwedzera iyo silicon carbide yekupisa element life. mushure mekuisa iyo silicon carbide yekupisa element, kufambisa kwesimba nenzira inotevera: Chekutanga isa simba ku30% -40% yesimba rekugadzira kuti preheat maminetsi makumi maviri -40 maminetsi, ndokuwedzera kusvika pa60% -70% yesimba rekugadzira kuita incubation20 maminetsi -30 maminetsi, mushure iyo tembiricha yesilicon carbide yekupisa element uye chirahwe zvakaenzana, wobva wawedzera simba zvishoma nezvishoma, yakanyorwa voltage uye yazvino kudzamara tembiricha yasvika kune tembiricha yaunoda, iyi ndiyo yakajairwa kushandisa magetsi uye yazvino yesilicon carbide yekudziya chinhu, Mukati meiyi nharaunda inogona kuiswa kune otomatiki tembiricha kudzora, apo kuramba kwakava kukuru kuwedzera iwo voltage yakakodzera, kugadzira iyo silicon carbide yekupisa element kune maintai n simba rakatsiga
6. Mushure mekuvira kwechoto, apo iyo silicon carbide yekudziya element inotidziisa isu kuisa tafura seinotevera: Kana simba rekutumira rikaiswa kutanga kushandisa 40% simba reyakajairwa simba, kupisa maminetsi makumi maviri, wobva wawedzera tembiricha kune tembiricha yaunoda. kwemaminitsi gumi kusvika pamaminitsi makumi matatu, uye wozoisa nguva yekubata.
7.Do kwete kungo tarisa iyo voltage kana yazvino mukufamba kwekushandisa silicon carbide kudziyisa chinhu, nekuti kana iwe ukashandisa iyo kuramba ichave yakakura zvishoma nezvishoma (iyo voltage ichave yakakura uye yazvino ichave iri diki), kana iyo yekuisa simba ichigara, ipapo tembiricha inogara iripo.
8.Kana iyo silicon carbide yekudziya chinhu ikakuvara mushure mekushandisa mwedzi, usashandure imwe nyowani, shandura yechinhu chakashandiswa chesilicon carbide kudziisa chinhu, ndizvozvo nekuti kuramba kuchakura kana kuchishandiswa, kushorwa kweiyo nyowani kuchaita. ive diki, kana iwe ukashandisa iyo nyowani tembiricha ichave yakasiyana neyakashandiswa yesilicon carbide yekudziya chinhu, kuti iwe ugone kushandura iyo yakashandiswa, izvo zvinoita kuti kuramba kwemidziyo yekudziya kuve pedyo. zvinhu, ndokumbira uchinje zvese zvinopisa zvive zvitsva, ipapo iyo yawakashandisa iwe yaunogona kuchinja kana uchinge waida.
9.Kushora kuchave kwakakura kana uchishandisa chinhu chekudziya, kana tembiricha isingakwanise kugutsikana kana magetsi asvika pakakwirira, ndapota chinja kubatana, kwakadai senge kubatanidza mune dzakateedzana kunogona kuchinja kuenderana, nyeredzi kubatanidza shanduko kune delta yekubatanidza, iwe inofanira kuchinja chinongedzo zvinoenderana nemutongi wako
10.Iyo simbi oxide uye slag nezvimwe zvinhu muvira zvinofanirwa kucheneswa munguva, usazvichengetera muvira, kana zvikabatanidza chinhu chinopisa kuti chikanganise.
11.Kuramba uchishandisa kushandisa kuchave nehupenyu hwakareba kupfuura kupindirana kwekushandisa.
12.Zvaunoda kudziirwa hazvifanirwe kunge zvine hunyoro hwakanyanya, kuitira kudzivirira chinhu chinopisa kupisa, edza kudzivirira kusangana kwakanangana nezvinhu zvine alkaline.
13. Iyo tembiricha yesilicon carbide yekupisa element pamusoro haifanirwe kupfuura 1550 ℃.
Kupfeka (tinya kuti uverenge zvimwe)
SICTECH Silicon carbide kudziyisa chinhu bemhapemha iri yerudzi rweyakagadzirwa firimu, iri kuputira pamusoro peinopisa zone mushure mekugadzirwa kwesilicon carbide kudziyisa chinhu, inogona kuwedzera hupenyu hwesilicon carbide kudziyisa chinhu munzvimbo yakakosha yekushandisa nharaunda, Inogona kuparadzaniswa negasi kumhanyisa kukwegura kwesilicon carbide kudziyisa chinhu, kuchengetedza iyo silicon carbide yekupisa element, kune rumwe ruzivo rwekupfeka ndapota ona inotevera sumo:
1. T kupfeka: iko kupfeka uku kuri kushandisa kwezasi oxidation mwero mukushandisa kwese, ita iyo silicon carbide yekudziya element inowedzera hupenyu hwekushanda hwe30-60%.
2. D kupfeka: kupfeka uku kuri kushandisa mune nitrogen
3. S kupfeka: iko kupfeka uku kuri kushandisa mumatatu echikamu matanda (W mhando yesilicon carbide kudziyisa chinhu) inoyerera girazi
4. Q kupfeka: kupfeka uku kuri kushandisa mune kesi yeutsi kana hydrogen
Mamiriro ekunze Migumisiro Kupikisa Yakurudzirwa jasi
Mhute Hupenyu hwekupisa hita dzimwe nguva hunochekwa kusvika pasi pechikamu chimwe chete kubva muzvishanu cheupenyu hunotarisirwa pasi pemamiriro ekunze akasvinwa. Izvo zvakakosha kusimudza tembiricha mushure mekuchenesa mwando zvakakwana pane yakadzika tembiricha kana uchitanga choto chitsva kana kutanga kushandisa imwe mushure mekumiswa kwenguva refu. Q jasi
Hydrogen gasi kuramba kwacho kunowedzera nekukasira uye simba renyika rinodzikira nekukasira kana tembiricha inodarika 1350 ° C mune hydrogen gasi mhepo. Hupenyu hwebasa, zvisinei, zvinoenderana zvakanyanya nehukuru hwehunyoro hwegasi. Inokurudzirwa kuti ishandiswe patembiricha isingasviki 1300 ° C mukamuri yevira. Zvinokurudzirwa kuti pamusoro pemutoro unoderedzwa zvakanyanya sezvinobvira. (5W / cm2)
Nitrogen gasi Nitrogen gasi inopindirana nesilicon carbide, ichiumba silicon nitride kana tembiricha ichidarika 1400 ° C, uye izvi zvinopfupisa hupenyu hwebasa. Nezve hunyoro, zvakafanana nezvakaitika kune hydrogen. Inokurudzirwa kuti ishandiswe patembiricha isingasviki 1300 ° C mukamuri yevira. Zvinokurudzirwa kuti pamusoro pemutoro unoderedzwa zvakanyanya sezvinobvira. (5W / cm2)。 D jasi
Amoniya yakashandurwa gasi (H275%) 、 (N225%) Izvi zvakafanana nezvakaitika mune hydrogen gasi uye nitrogen gasi. Inokurudzirwa kuti ishandiswe patembiricha isingasviki 1300 ° C mukamuri yevira. Zvinokurudzirwa kuti pamusoro pemutoro unoderedzwa zvakanyanya sezvinobvira. D jasi
Kuora kwekuita gasi (N2, CO, CO2, H2, CH2etc.) Yakaora hydrocarbon inosungira pamusoro pechinhu chekupisa zvinhu uye inogona kukonzera kupfupika-kutenderera mumhepo inosanganisira hydrocarbon. Izvo zvinodikanwa kupisa kabhoni nekupinza nguva nenguva mweya mukati mevira. Icho chemoto chemagetsi chinofanirwa kunge chakagadzirwa nehupamhi hwakatsemuka pakati peEEMAEMA kudziyisa zvinhu kudzivirira pfupi-kutenderera. D jasi
Sarufa gasi (S 、 SO2) Iko pamusoro kwezvinhu zvekudziya zvinokuvadzwa uye kuramba kurwisa kunowedzera zvakanyanya kana tembiricha yeEEMA ichipfuura 1300 ° C. Shandisa izvo zvinopisa zviri pasi pe1300 ° C. D jasi
Vamwe Zvinhu zvakasiyana-siyana, zvinoburitswa kubva muzvinhu zvakagadziriswa panguva yekuverenga, kusanganisira mahusidhi akadai semutobvu, antimony, alkali uye alkaline pasi, pamwe ne oxides, makemikari macomputer ayo anogona dzimwe nguva kunamatira kune zvinopisa zvinhu nekuzvikanganisa. Izvo zvakakosha kuti ubvise izvi zvisati zvaitika kubva kuzvinhu zvakagadziriswa kana kuzvipedza nekuisa chiteshi chebudisi. S jasi
Magetsi zvivakwa, makemikari zvivakwa (tinya kuti uverenge zvimwe)
SICTECH Silicon carbide yekudziya zvinhu zvinowanzoenderana nekushomeka kweiyo oxidation, kuumbwa kweSilica uye kuwedzera kwemagetsi kuramba, kunodaidzwa kunzi kuora kuri kushandiswa.Iyi oxidation reaction inoratidzwa mune inotevera fomula.
Silicon carbide (SiC) inopindirana neoksijeni (O2) mumhepo uye pamusoro pezvinhu zvinopisa zvishoma nezvishoma oxides, ichiumba Silica (SiO2), inova insulator, nepo huwandu hwayo huchiwedzera. Izvi zvinomutsa kuramba kwemagetsi. Oxidation inoitika kana tembiricha ichisvika 800 ° C uye ichikurumidzirwa sezvo tembiricha inowedzera. Rapid oxidation ichaitika mune yekutanga nhanho yekushandisa, asi iwo mwero weiyo oxidation unodzikira zvishoma nezvishoma. muganho wehupenyu hwebasa unofungidzirwa kuve kana kushomeka kwayo kuchikwira kusvika panenge katatu nguva kuramba kwekutanga. (Hupenyu hweLD uye LS hunogara kudzamara kuramba kurwisa kuchisvika kagumi kukosha kwekutanga). Icho chikonzero ndechekuti, inosvika pakukwiridzirwa kwakapetwa katatu, musiyano mukushomeka kwechinhu chimwe nechimwe unova mukuru uye kupisa kwekupararira kwechinhu chimwe kuchikura, zvichikonzera kusakwana kwekuparadzirwa kwetembiricha mukamuri yevira. hupenyu, kukonzera kwete chete kuramba kuramba kuwedzera asi shanduko mune inooneka porosity uye kutsemuka kukuvara nekudzikira kwesimba, saka kungwarira kunofanirwa kushandiswa.